Homepages Slider - अर्को बर्ष फेवातालमा केवलकार सरर.........!
अर्को बर्ष फेवातालमा केवलकार सरर………!
काठमाडौं । जापानीज र नेपाली लगानीकर्ता मिलेर सुन्दर पर्यटकीय शहर पोखरामा निर्माणाधिन अन्नपूर्ण केवलकार अर्को बर्षदेखि संचालनमा आउने भएको छ । उक्त केवलकार फेवातालको किनारामा रहेको सेदीबगरदेखि सराङकोटसम्म साढे दुई किलोमिटर लामो हुनेछ । प्रतिष्ठित व्यवसायी कालु गुरुङ समूहको ८५ र जापानीज समूह मियाहराको १५ प्रतिशत लगानीमा गतबर्षदेखि यो केवलकार बन्न लागेको हो । जापानी समूहमा टाकासी मियाहराको लगानी छ । ... थप पढ्नुहोस्
कलश सिमेन्टका मालिक नै सुपारी र मरिचको अवैध धन्दामा !
सुपारी किङ्ग अनिल पटवारी फरार, भन्सार अधिकृतमाथि छानविन तीव्र काठमाडौं । सुपारी किङका रुपमा चर्चित बीरगंजका उद्योगी अनिल पटवारी एकाएक भूमिगत भएका छन् । देखाउने दांतका रुपमा सिमेन्ट उद्योगी पनि रहेका पटवारीको मुख्य धन्दा भने सुपारी र कालो मरिचको तस्करी गर्नु रहेको खुलासा भएको छ । गत जेठ २१ गते बीरगंजको मुख्य नाकाबाट भारततर्फ लैजान लागिएको १२ मेट्रिक टन मरिच उनैको भएको रहस्य खुलेपछि उनी मोबाइल स्व... थप पढ्नुहोस्
साढे ३३ किलो गोल्ड तस्करीको छानविन अन्तिम चरणमा काठमाडौं । नेपालस्थित सामसुङ मोबाईलका अधिकृत बिक्रेता तथा प्रतिष्ठित व्यवसायी दीपक मल्होत्राको चर्चित सुन तस्करी काण्डमा कुनै संलग्नता नरहेको गृह मन्त्रालय उच्च स्रोतले जनाएको छ । बिगत केही दिनदेखि व्यवसायी मल्होत्रा साढे ३३ किलो सुन तस्करीकाण्डमा मुछिएको, उनको व्यवसायिक साझेदार भनिएका हुण्डी व्यापारी बिमल पोद्दारलाई उच्चस्तरीय छानविन समितिले प्र... थप पढ्नुहोस्
४ पुस, काठमाडौं । केही दिनअघि ताप्लेजुङ जिल्लाको सिदिङ्वा गाउँपालिका–६ मेहेलेमा जन्ती बोकेर पहिलो पटक पिकअप गाडी पुग्यो । गाडीको हर्न बजेको सुनेर सबै गाउँले दगुर्दै सडकमा भेला भए । गाडी रोकिएपछि कोहीले ढोग्न थाले त कोहीले एकआपसमा भलाकुसारी गर्न थाले । स्थानीय चन्द्रीमाया बुढाथोकीले पिकअपलाई ढोग्दै भनिन्, “अब नाम्लोमा नून र चामलका बोरा बोक्नुपर्ने दिन गए, हिँड्न पनि नपर्ने भयो ।” उक्त सडक निर्मा... थप पढ्नुहोस्
२९ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले आफ्नै स्रोतसाधन प्रयोग गरेर विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ मापन गर्ने भएको छ । सगरमाथा मापनका लागि आवश्यक गृहकार्य गर्दै मापन शुरु गर्ने अन्तिम तयारी सकिएको छ । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सहप्रवक्ता पुण्यविक्रम पौडेलले मापनका लागि सरकारले रु दुई करोड विनियोजन गरिसकेको र आवश्यक थप रकमका लागि अर्थ मन्त्रालयले सुनिश्चितता गरिसकेको जानकारी दिए । उनले... थप पढ्नुहोस्
राष्ट्रियसभा निर्वाचनका विषयमा काँग्रेस र एमालेबीच विवाद
२९ मंसिर, काठमाडौं । एमाले र कांग्रेसको विवाद चर्किंदै जाँदा राष्ट्रियसभा गठनमा ढिलाइ हुने भएको छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचन प्रणालीबारे नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच विवाद बढ्दै गएको छ । दुई दलबीच राष्ट्रियसभामा आफ्नो पार्टीको प्रतिनिधित्व कसरी बढी गराउने भन्नेमा मतभेद देखिएको हो । यस्तै निर्वाचनपछि दुई दलबीच तिक्ततासमेत बढ्ने देखिएको छ । एमाले राष्ट्रियसभाको चुनाव नयाँ सरकारले गराउनुपर्ने पक्षमा छ ... थप पढ्नुहोस्
धनुषा ३ बाट निधिलाई पछि पार्दै महतोले मारे बाजी
२४ मंसिर, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंं ३ बाट राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका राजेन्द्र महतो विजयी भएका छन् । मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालयका अनुसार उनीे ३० हजार ७५० मत प्राप्त गरी विजयी भएका हुन् । निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली काँगे्रसका विमलेन्द्र निधिले २७ हजार ८४७ मत प्राप्त गरेका छन् । यसैगरी प्रदेशसभा सदस्य धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंं २ (क) मा संघीय समाजवादी... थप पढ्नुहोस्
१९ मंसिर, काठमाडौं । नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्रमा फरक पहिचान बनाउन सफल रहेको सटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले आफ्नो अत्याधुनिक website सार्वजनिक गरेको छ । यस websiteलाई www.ctznbank.comमा हेर्न सकिने छ । यस websiteलाई Dynamic version मा स्तर बृद्वि गरिएको छ र अव उपरान्त यस लाई कुनै पनि स्मार्ट फोन बाट सजिलै प्रयोग गर्न सकिने छ । यस website मा घरबाट नै खाता खोल्न मिल्ने , कर्जाको लागी आवेदन दिन म... थप पढ्नुहोस्
सशस्त्र प्रहरी बलका गोताखोरको निःशुल्क बीमा हुने
१९ मंसिर, काठमाडौं । नेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनीले जोखिमपूर्ण काम गर्ने सशस्त्र प्रहरी बलका गोताखोरलाई रु दुई लाख बराबरको बीमा गर्ने भएको छ । कम्पनीले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानकारीअनुसार विपद् व्यवस्थापनमा निरन्तर खटिने गोताखोरको निःशुल्क बीमा गर्न लागिएको जानकारी दिएको हो । सशस्त्र प्रहरी बलको विपद् व्यवस्थापन गणले सडक दुर्घटना, बाढीपहिरो तथा अन्य विपद् व्यवस्थापनमा सक्रिय ... थप पढ्नुहोस्
निर्वाचन व्यवस्थापनका सबै सामग्री केन्द्रमा पुग्यो : आयोग
१९ मंसिर, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि व्यवस्थापनका सबै सामग्री मतदान केन्द्रमा पुगेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । मंसिर २१ गते ४५ जिल्लाका १५ हजार ३४४ मतदान केन्द्रमा हुने मतदानका लागि सुरक्षा प्रबन्धसहित आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए । “निर्वाचन सम्पन्न गराउन आवश्यक ६७ प्रकारका सामग्री सम्बन्धित केन्द्रमा पुगेको छ, दो... थप पढ्नुहोस्
दुवै मृर्गौला फेरेका कैदीको उपचारकै ...
विद्मुत प्राधिकरणलाई निःशुल्क ...